Wasiirka Amniga oo sheegay inay ku dadaalayaan suggida ammaanka Musharaxiinta – idalenews.com
Muqdisho(INO)- Wasiirka Wasaarada Amniga Gudaha Xukuumadda Somaliya C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay inay juhdi badan ku bixinayaan sidii loo sugi lahaa ammaanka Musharaxiinta ku sugan Magaalada Muqdisho.
Wasiir C/risaaq ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Somaliya uu sameeyay Guddi amni oo ka shaqeeya sidii Doorashada ay ugu dhici laheyd si nabadgelyo ah.
“Guddigaasi waa la sameeyay, Ra’iisul wasaaraha ayaa wareegto ku magacaabay aniga soo gubdin baan lahaa, wuxuu ka kooban yahay maamul goboleedyada oo dhan dad matala, ciidnaka Booliiska, Wasaaradaha amniga iyo Gudaha, hay’adda Nabad sugidda, waxaa kaloo qeyb ka ah AMISOM iyo UN, marka guddigaasi waa la sameeyay howshooda wey billaabeen weyna u socotaa, iyaga ayaana isku maqan.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu aaminsan yahay in Doorashada 100% ay ku dhici doonto jawi nabadgelyo ah, islamarkaana qorshahaasi uu socdo.
Guddiga Amniga ee Ra’iisul Wasaaraha magacaabay ayaa wuxuu ku sheegay shaqadooda inay tahay sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka Musharaxiinta, Ergooyinka iyo Odayaasha Dhaqanka.
Doorashada Somaliya ayaa loo diyaargaroobayaa dhawaan, iyadoo falal lidi ku ah dhanka ammaanka ay ka dhacayaan Magaalada Muqdisho.